Mozika mafana : Hitondra « bômba be » etsy Analakely i Tence Mena
Mpanakanto fantatra amin’ny fihetsika mahery vaika. Rehefa ela tsy tazana tamin’ny fampisehoana teto an-toerana, hivoaka amin’ny fahanginany ary hitondra avy hatrany ny “Bômba be” etsy amin’ny Le Glacier Analakely i Tence Mena, ary manome fotoana …Tohiny
Raharaha Hiary Rapanoelina : Hiakatra fitsarana anio
Hivoaka anio ny didim-pitsarana momba ilay raharaha “fifosana facebook”, izay niampangana an’i Hiary Rapanoelina sy ny vadiny. Efa nisintona ny fitoriana ireo artista sy ilay depiote niharan’izany fanaratsiana sy fanalam-baraka izany taorian’ny fanelanelanana nataon’ny “comité …Tohiny
Kalon’ny fahiny sy ny omaly : Hifamotoana eny Mahamasina ry Gasy Miangola, Feon’Analamanga ary Salomon
Mbola tsy lefy laza ary manana ny anjara toerany eo amin’ny kolontsaina malagasy. Hifamotoana eny Mahamasina ry Gasy Miangola, Feon’Analamanga ary Salomon ao anatin’ny fiangaliana indray ireo kalon’ny fahiny sy ny omaly. Etsy amin’ny efitrano …Tohiny
Tao anatin’ny roa volana : Diplomaty lehibe 6 no efa noraisin’ny Filoha
Tao anatin’ny roa volana voalohany tamin’ity taona vaovao ity dia efa nandray diplomaty lehibe enina sahady ny Filoham-pirenena ankoatra an’ireo fitokanan-javatra vita any amin’ny faritra sy ny fanakaikezana ny vahoaka. Araka ny efa voalazany hatrany …Tohiny
Vao andro voalohan’ilay “Conférence des Bailleurs et Investisseurs” , nisokatra omaly, tao amin’ny foiben’ny Unesco tany Paris dia efa nihoatra ny niheverana azy ny fahombiazana azo. Nahatratra 6,4 miliara dolara ny vola azo avy amin’ny ...Tohiny